Coinbase bilaabmaa imtixaanka kama dambaysta ah ee Segwit - Blockchain News
Coinbase bilaabmaa imtixaanka kama dambaysta ah ee Segwit
Coinbase ayaa ku dhawaaqday Twitter in imtixaanka Seeraar SegWit waa in marxaladaha ugu dambeeya, oo diyaar u noqon doona Seeraar dirista iyo helista in “isbuucyada soo socda.” Tani waxaa loogu talagalay si loo yareeyo ujrooyinka Seeraar iyo jeer kala iibsiga, oo ay sii yareyn load ee ay network.
BTC: on xisaab Coinbase ee sarrifka GDAX for ah oo ku saabsan lammaane USD 5% ee mugga ganacsi maalin walba Seeraar ayaa, sida ay CoinMarketCap. Marka aad ku dari adeegga kale Coinbase BTC Somailand, oo laba laba kale oo lacagta iyo xawaalad kale waxaa ammaan ah in loo qaato in qayb badan macaamil maalin kasta dhici dhex Coinbase / GDAX.
Sida sida horumarinta this feasibly yeelan kara saamayn garan on jeer macaamilka Seeraar caalamka iyo khidmadaha.
Haddii aad ku riyoonayaa ...
Post Previous:In dal oo kala duwan, Qiimaha Seeraar kala duwanaan karaa
Post Next:Kaliya afar bedasha Crypto adeeca shuruudaha jaangooyaha ee South Korean